ह्याट्रिक क्यालिफोर्निया,(गोविन्द गिरी पे्ररणा)
तेश्रो पटक क्यालिफोर्नियाका लागि उड्दै थिएँ ।<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
वास्तवमा अमेरिकाको विशालताको वारेमा वुझ्न अमेरिका नै आउनु पर्छ । अमेरिकाको विशालता अन्तवाट वुझ्न झण्डै सकिंदैन ।
म भर्जिनिया राज्यको मनासस नामको शहरमा वस्छु । यो भर्जिनिया राज्य नेपाल भन्दा ठूलो छ ।
अमेरिकाको टेक्सास राज्य जर्मनी भन्दा ठूलो छ ।
अमेरिकामा ३ समय चल्छ, पूर्विय समय, मध्य समय र पश्चिमी समय । अमेरिकाको पूर्व तटिय राज्य भर्जिनिया र पश्चिम तटीय राज्य क्यालिफोर्निया वीच ३ घण्टाको समय अन्तराल छ र नेपाल वाट वैंकक पुग्ने समयमा भर्जिनियावाट क्यालिफोर्निया पुगिंदैन ।
भन्छन्, यही विशालताको कारण सवै अमेरिकीहरु अमेरिकाको सवै राज्यमा पुग्न सक्दैनन् सिंगो जीवनकालमा ।
म भने अहिलेसम्म एक दर्जन राज्यमा पाइला टेक्न सक्षम भएको छु । तर संयोग नै हो म तेश्रो पटक क्यालिफोर्निया जाँदै थिएँ विशेष कारणले । त्यो विशेष कारण एक छिनपछि ।
म पहिलोपल्ट क्यालिफोर्निया मैले सम्पादन प्रकाशन गरेको नेपाली भाषाको अखवार विश्वपरिक्रमाको वजार प्रवद्र्धनका लागि आत्मिय राजेन थापाको निम्तोमा गएको थिएँ । त्यो वेलाको घुमाई एक प्रकारले पारिवारिक प्रकारको थियो । म राजेनजीकै निवासमा वसेको थिएँ । मित्र ध्रुव थापाको सौजन्यतामा वर्कली विश्वविद्यालयको सेरोफेरो मारेको थिएँ । गोविन्द शाहीको सौजन्यमा गोल्डेन गेटको दर्शन गरेको थिएँ तथा सानफ्रान्सिस्कोको चक्कर लगाएको थिएँ ।
त्यही क्रममा त हो, गोल्डेन गेट जाने क्रममा मैले थाहा पाएँ, त्यहाँको तटमा, यौटा सानो अल्कात्र्याज नामक टापूमा जेल छ भन्ने कुरा , र त्यो जेल जेल मात्र नभएर मृत्युप्रतिक्षालय हो, अर्थात् डेथ रो । त्यो थाहा पाउने वित्तिकै उदास भएको मेरो मन त्यो दिनभरि एक तमासको भएको थियो, यद्यपि मेरो यो मनोभाव ध्रुवजी र गोविन्दजीलाई छनक नहोस् भन्ने भरमग्दूर प्रयास गरेको थिएँ । तर कति सफल भएँ वा असफल म अझै अनभिज्ञ छु ।
त्यस्तो अवस्थामा पनि श्रीमतीसँग समय विताउन दिइन्छ रे । कस्तो मनोदशा हुँदो हो ती जोडीलाई ?
अझ गफकै क्रममा सुनें, मृत्युदण्ड दिन विषालु सूइको इन्जेक्सन लगाउँदा दुख्यो वा दुख्छ भनेर मानव अधिकार वादीले वकालत गर्ने गरेका छन् । मृत्युदण्डमा पनि यो कस्तो खालको मानव अधिकार हो, वाँच्न नपाउने क्रममा । अनिवार्य मृत्यृ ग्रहण गर्नु पर्ने क्रममा । यस्तै कुराले हो मेरो मनलाई एक तमासको वनाएको ।
तर साँझ रातो झोल र मासुका चोक्टा चिथोर्न थालेपछि धेरैथोक विस्मृतिमा खात लाग्न पुगेको थियो ।
दोश्रोपल्ट त म एएनए भन्ने अमेरिकाको यौटा पुरानो तर विशाल संस्थाको सम्मेलनमा भाग लिन गएको थिएँ ।
र यसपल्टको यात्रा भने ती भन्दा भिन्न मात्र होइन, एक प्रकारले अपूर्व कार्यक्रमका लागि जाँदै थिएँ । शुक्रवार दिउँसो पुगेर, शनिवार घुमघाम गरी आइतवार साँझको त्यो विशेष कार्यक्रममा भाग लिए लगत्तै कार्यक्रमस्थलवाटै एयरपोर्ट जानेगरी समय मिलाएको थिएँ र त्यसै अनुसारको हवाई टिकटको व्यवस्था गरेको थिएँ ।
प्लेनको सिटमा वस्दा मेरो हातमा डायन डि प्राइमाको पुस्तक 'मेम्वायर अफ ए विटनिक' थियो । आख्यान भनिएको यो पुस्तक वास्तवमा संस्मरण हो र यस्तो संस्मरण विरलै लेखिन्छिन् । यो संस्मरण डायनको युवावस्थाको यौनजीवनको उदात्त वर्णनले भरिएको छ । यौनको कुनै पनि पक्ष वाँकी छैन । अप्राकृतिक यौन संसर्ग, समलिंगी यौन सम्पर्क, हाडफोरा यौन गतिविधि सव थोक उदात्त ढँगले प्रस्तुत गरिएको छ । यौटा स्वास्नी मान्छे यति धेरै पुरुषकोसँग यति धरै पटक संसर्ग गर्न सक्छे, पत्याउन गाह््रो पर्ने यथार्थले पाठकको मन मष्तिष्कलाई रन्थन्याउन सक्षम छ । मैले यो पुस्तक नै यात्राको लागि किन रोजे ? यौनको कारण ? होइन । मैले यि लेखिकाको विषयमा खोजि गरें, अमेरिकाको विट आन्दोलनकी एक सक्रिय पात्र लामो समय न्यूयोर्कमा वसेपछि सानफ्रान्सिस्कोमा वसाई सरेकी रहेछिन् र त्यहाँको पोयट लरेट पनि भैसकेकी रहिछन् । सन् १९६९मै अर्थात् ४१ वर्षअघि नै त्यस्तो विषय र विषय वर्णन लेख्न सक्ने सामथ्र्यवान लेखिका र साहसी प्रकाशक साँच्चै प्रसंशनीय हुन् ।
यो पृष्ठभूमिमा मेरो रुचि यि लेखिकाप्रति जागेको हो । र मैले खोजिको क्रममा यिनी सान फ्रान्सिस्को मै वस्छिन् भन्ने तथ्य पत्तो पाएपछि कतै यिनलाई भेट्न सकिन्छ कि भन्ने पनि लागेर सम्भावित स्थान र प्राप्त सूचनाको उपयोग गरें तर पत्तो लागेन तर पनि यिनी प्रति मेरो रुचि यथावत् रह्यो र यो पुस्तक मैले यात्राका लागि वोकेको थिएँ ।
क्यालिफोर्निया जाँदा वा पश्चिमतिर जाँदाको मजा हो, समय पछि सर्दै जानु । अतः समयसँग वग्दै जाँदा उज्यालोको उज्यालै दृष्यहरुका साथ यात्रा गर्न पाइन्छ । यस पटकको मेरो उडान सिधा नभएर एक विसौनी क्यालिफोर्नियाको लँग वीचमा हुँदै वर्कली पुग्ने थियो । यसरी वीचमा ट्रान्जिट हुँदा यौटा नयाँ ठाउँको अवलोकन गर्ने अवसर र मजा दुवैको उपयोग गर्न पाइन्छ । विदेशमा यसरी दुवाई, दोहा, मस्कट, वैंकक, ताईपेई, सियोल, भियना देख्न र ती स्थानको स्पर्श गर्न पाएको छु । अमेरिकामै पनि विभिन्न राज्यमा जाँदा आफूले पाइला नहालेका स्थानहरु यस्तै गरी कोलोराडोको डेन्भर लगायतका स्थानको स्वाद अनुभव गर्न पाएको छु ।
लँग वीचको हवाई दृष्यपानले त धीत मर्ने कुरै भएन । अहो, हामी समुद्रले नछोइएका मुलुकका भूपरिवेष्टितहरुलाई समुद्र यसै पनि रुचि र चाखको विषय हो, त्यसमाथि लँग वीचलाई हवाई दृष्यावलोकन गर्नु भनेको काउकुती लगाउनु जस्तो मात्र हो भन्ने लाग्यो मलाई ।
विमानवाट ओर्लेपछि पनि यौटा उदात्त रमाइलो के लाग्यो भने यो विमानस्थल अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको लँग वीचको नभएर नेपालको झापाको विमानस्थल हो । एक त विमान स्थल साँघुरो थियो, अर्काे अमेरिकाका अन्य विमानस्थलको झैं विमानवाट सिधै वन्द सुरुरुँगवाट टर्मिनल भवनमा पुग्ने होइन रहेछ । मजाले प्लेनवाट ओर्लेर जमिनमै हिंडेर टर्मिनल भवनमा जानुपर्ने रहेछ ।
टर्मिनल भवन खचाखच थियो, कारण, भवन सानो रहेछ र त्यहीं वार, त्यहीं रेष्टुँरा, त्यहीं गिफ्ट सप, त्यहीं शौचालय, अर्थात त्यहाँ सवै सुविधाहरु थिए र सानो सानो ठाउँ ओगटेका थिए ।
अव मैले यो ठाउँमा ३ घण्टा विताउनु थियो । अतः मैले वारको यौटा स्टूलमा आफूलाई विसाएर यौटा वियर अर्डर गरें र ओठमा वियरको चुस्की र डायना डि प्राइमाका यौन उत्तेजनाले लफ्रक्कै भिजेको आत्मकहानीमा आँखा विसाउने जमर्को गरें ।
लँग वीचवाट वर्कलीको उडान खासै लामो थिएन र वर्कली पुग्दा दिउँसोको झण्डै ३ वजेको थियो । मैले प्लेनले जमिन छोएपछि सेल फोन अन गरेर ध्रुव थापाजीलाई मेरो आगमनको सूचना दिएँ र उहाँले छिट्टै आइपुग्छु भन्नुभयो ।
वास्तवमा मेरो ह्याण्ड क्यारी मात्र भएकाले लगेजको सामान कुर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन र म टर्मिनल भवनवाट छिट्टै वाहिर निस्केर क्यालिफोर्नियाको वर्कली अर्थात वे एरियाको शुद्ध हावापान गर्न थालें ।
छोटो प्रतिक्षापछि नै चिरपरिचित मुस्कानसहित ध्रुवजी आइपुग्नु भयो र हामी विमानस्थलवाट शाट्टूक एवेन्यूमा अवस्थित टेष्ट अफ हिमालय रेष्टुँरामा पुग्यौं र त्यहाँ खाना उदरस्त गर्ने कर्मपछि ध्रुवजीले मलाई विष्णु गुरुँगको निवासमा पुर्याउनुभयो । साँझसम्म विष्णुजी र उहाँका श्रीमानजी जसवहादुरजीको सौजन्यमा घुमघाम गर्ने अनि राती रेष्टुँराको व्यस्तता सकिएपछि ध्रुवजीले लिन आउने सल्लाह भयो । शुक्रवारको साँझ रेष्टुँरा व्यवसायीका लागि अति महत्वपूर्ण दिन हो भन्ने मलाई सन् १९९२ मा लण्डन यात्रा गर्दाखेरिदेखि नै थाहा थियो ।
विष्णुजीसँग मेरो भेट गत वर्ष अर्थात् सन् २००९ को एएनएको वार्षिक सम्मेलनको वेला भएको हो, त्यो भन्दा अघि हामीवीच टेलिफोन सम्पर्क मात्र थियो र यो सम्पर्क गराउने सेतु थियो, मैले सन् २००७ देखि सम्पादन प्रकाशन गर्न थालेको पाक्षिक पत्रिका विश्वपरिक्रमा थियो ।
एएनएको सम्मेलन सकेर फर्कने दिन विहान व्रेकफास्टका लागि विष्णुजीले घरमा निम्तो गर्नु भएको थियो र उहाँका श्रीमान म र लोक गायक रामप्रसाद खनाललाई लिन हामी वसेको सम्मेलनस्थलको होटल आउनु भएको थियो ।
विष्णुजीले हामीलाई निम्तो त गर्नुभयो, आफूचाहीं अघिल्लो रातीदेखि नै विरामी भएर ओछ्यान पर्नु भएछ । उहाँलाई सम्मेलनको होहल्ला र भीडले विरामी वनाएछ । यो कुरा हामी उहाँको निवास पुगेपछि मात्र थाहा पायौं । हामी पुग्दा पनि उहाँ सुतिनै रहनु भएको थियो ।
जे होस् हामीले छिटो स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै चिया चमेना गरेका थियौं र विष्णुजीका पति जसवहादुर गुरुङले हामीलाई विमानस्थल पुर्याउनु भएको थियो ।
मनसाय त ध्रुवजीले पनि संकेत गर्नु भएकै थियो, साँझ यसो घुमघाम गर्ने तर यो घुमाई चाहीं गणेशले सुमेरु पर्वतको परिक्रमा गरेजस्तो घुमाई भयो । अर्थात केही स्न्याक्स र पेय टेवुलमा आएपछि त्यही टेवुलमा वसेर भावनात्मक घुमाई पो घुमियो त ।
जे होस् वे एरियाको मन्द चिसो हावा र विष्णुजीका परिकारमा रम्दारम्दै कामवाट जसवहादुरजी पनि आइपुग्नु भयो । अवको खानपिन र गफमा उहाँ पनि सामेल हुनु भो ।
समय कति छिटो वित्छ, रेष्टुँराको काम सकेर ध्रुव दम्पत्ती आईपुग्दा पो थाहा भयो, समय निकै घर्किसकेछ ।
अव रात्री खाना, पिना र रमाइला गफको सिलसिला पुनः अघि वढेको थियो र हामी विष्णु निवासवाट विदा भएर थापा निवासतिर लाग्यौं ।
राजेनजीसँग जाने वित्तिकै भेट भो । उहाँ कोठामा आइसक्नु भएको रहेछ ।
वास्तवमा सन् २००९ को एएनए सम्मेलनमा राजेन थापासँग परिचय नभएको भए आज म यसरी तेश्रोपल्ट उहाँहरुको निवासमा पुग्ने नै थिईंन ।
लँग वीचवाट शुरु भएको खानपानको सिलसिला र दिनभरको यात्राले शरीरलाई लाटो लाटो वनाउन थालिसकेको थियो । त्यो वुझेरै होला राजेनजीले भन्नुभयो, गिरीजी आज आराम गर्नुहोस्, कुराकानी भोलि मर्निंग वाकमा गरौंला ।
यो मेरो सधैं कफी पिउने ठाउँ हो । यहाँको कफीको स्वाद विशिष्ट खालको छ । राजेन थापाले अर्गानिक कफी पाइने फेलिनी क्याफेमा मेरो पहिलो भ्रमणको वेला दोश्रो दिनको विहान जुन कफी सपमा लानु भएको थियो यस पल्ट पनि हामी त्यहीं पुगेका थियौं र कफीको चुस्की लिंदै मर्निंग वाकका लागि पार्क गरिने ठाउँमा कार राखेर पैदल यात्रामा हामी लाग्यौं वर्कली मरिनातर्फ । स्वच्छ हावा, टाढा टाढासम्म देखिने सामुद्रिक कुनोको अथाह विशालता । निकै टाढा मधुरो देखिने गोल्डेन गेट, सिंगै डाँडामा शहर वसेको सान फ्रान्सिस्को । वास्तवमा यो ठाउँको मोहकता आफ्नै प्रकारको छ , अन्य शहर वस्तीसँग अतुलनीय ।
प्रात:कालिन भ्रमणपछि खाना खाएर सानफ्रान्सिस्को जाने योजना मैले पहिल्यै वनाएको थिएँ । त्यसको खास कारण थियो 'सिटी लाइट वुक स्टोर' । म त्यसको भ्रमण गर्न चाहन्थें । तर त्यता लाग्नु अघि यौटा अन्त्येष्टी समारोहमा सामेल हुनु पर्ने भयो । एकजना नेपालीको अप्रत्यासित निधनको समाचार मैले नेपाली पोष्टमा भर्जिनियामै पढेको थिएँ जसको समाचार प्रेषक थिए जाँगवु शेर्पा ।
अन्त्येष्टि समारोहमा जान मित्र अनिल पौडेल पनि साथ हुनुहुन्थ्यो, हामीले उहाँले काम गर्ने ठाउँवाट लिएर आएका थियौं ।
त्यहाँ अलिक लामै समय लाग्ने देखिएकाले हामीले त्यहाँवाट औपचारिक कार्यक्रम शुरु हुनु अघि नै प्रस्थान गर्यौं । वास्तवमा मृतकका परिवारले मुत्युको विषयलाई सार्वजनिक गर्ने, समाचार वनाउने विषयमा विमती जनाएकाले त्यस्को समाचार वनाउनु पनि थिएन । मात्र श्रद्धा चढाउने औपचारिकताका लागि पुग्ने हामीहरु अर्को महत्वपूर्ण कामका लागि हिंडिहाल्नु थियो ।
अन्त्येष्टी गृहवाट हामी प्रस्थान गरेपछि मैले विजय घिमिरेको सेल फोनको नम्वर डायल गरें । अनि उहाँलाई सिटी लाइट वुकस्टोरछेउ आइराख्नु भनें ।
रमाइलो गफ र ठट्टा गर्दै हामी सिटी लाइट वुक स्टोर भएको कोलम्वस एवेन्यू पुग्यौं । तर शनिवारको दिन पार्किंगको समस्या, पार्किंग खोज्दा खोज्दै केही समय ढिलो सिटी लाइट वुक स्टोर पुग्दा विजय घिमिरे हाम्रै वाटो हेरेर आँखा तन्काइरहनु भएको थियो ।
यौटा किताप पसल हेर्न मैले एक प्रकारले मरिहत्ते गरेको देखेर अनिल पाण्डे र विजय घिमिरेले सोधे, के छ विशेषता यो किताव पसलको ?
मैले जाने जति तथ्य र कुरा वताई दिएँ । अनि हामीले त्यो किताव पसल अघि थुप्रै फोटाहरु खिच्यौं । वास्तवमा यौटा सपना पूरा भएको अनुभव गर्दै थिएँ म । साहित्यको नाताले ऐतिहासिक महत्व वोकेको स्थानमा म आइपुग्न पाएको थिएँ ।
सिटी लाइट वुकस्टोर एण्ड पव्लिसर्सको लामो इतिहास छ आफ्नै र जोडिएको छ अमेरिकी साहित्यको महत्वपूर्ण पाटो पनि ।
यसका मालिक हुन् प्रख्यात वीट कवि लरेन्स फर्लिंहेट्टी । यी वयोवृद्ध कविसँग भेट्न पनि पाइन्छ कि भनेर मैले खोजखवर गरेको थिएँ । ९० वर्षका यिनी जिवित नै पो छकि छैनन् भन्ने आशंका लागेको थियो । तर थाहा भो, यिनी त यूरोप भ्रमणमा गएका रहेछन् ।
यो स्टोरको स्थापनाको कथा चाखलाग्दो छ ।
सन् १९५३ को कुनै दिन कवि लरेन्स आर्टिगुज भवन (सिटी लाइट वुक्स जुन घरमा छ ) को छेउवाट कतै जाँदै थिए । उनले देखे यौटा साइनवोर्ड पाकेट वुक सप झुण्ड्याउँदै गरेका मार्टिनलाई । लरेन्सले आफूलाई मार्टिनको पत्रिका सिटी लाइट्सको एक लेखकको रुपमा परिचय प्रस्तुत गरे र भने उनी पनि कहिले देखि यौटा वुकस्टोरको वारेमा सोच्दै थिए । पछि मार्टिन र लरेन्सले जनही ५०० डलर हालेर साझेदारीमा व्यवसाय शुरु गरे । तर २ वर्षपछि मार्टिनले आफ्नो शेयर १००० डलरमा लरेन्सलाई वेचेर न्यूयोर्क प्रस्थान गरेपछि यो स्टोर उनको एकल स्वमित्वमा आयो ।
सिटी लाइटस् वुकस्टोरले प्रकाशनको काम लरेन्सकै पुस्तक प्रकाशनवाट थाल्यो तर एलेन गिन्सवर्गको हाउल कविता प्रकाशनले चर्चा र विवाद दुवै एकसाथ कमायो । यो पुस्तक प्रकाशनवापत मुद्दा लाग्यो जसले चर्चाको शिखरमा पुर्याइदियो ।
सन् १९७१ मा न्यान्सी पिटर्सले लाइव्रेरी अफ कांग्रेस छाडेर सिटी लाइट्समा लरेन्सको आग्रहमा पूर्णकालिन काम गर्न थालेपछि यसले अझ व्याप्ति पायो । तर आर्थिक संकट टार्न सन् १९८४ मा पिटर्सले यसको आधा स्वमित्व किनेपछि यसले नयाँ जीवन पायो ।
कुनैवेला यो पुस्तक पसल वीट कविहरुको तीर्थस्थल जस्तै थियो । कविहरुले समय विताउने अड्डा थियो ।
म पुस्तक पसल भित्र छिरें र लाग्यो यौटा अभूतपूर्व स्थानमा पुगेको छु । शुरुमा यौटा कोठावाट शुरु भएको सिटी लाइटस् अरु वहालवालाहरुले छाड्दै जाँदा र त्यसलाई सकार्दै जाँदा पछि सिंगो भवन नै सिटी लाइटस्को हुन पुग्यो ।
युरोपवाटसमेत यो पुस्तक पसल हेर्न आउँछन् भन्ने तथ्य पत्तो लागिसकेको मलाई गर्ववान्वित हुनुको विकल्प थिएन ।
वेसमेण्ट, वीच र माथिल्लो तल्ला गरी ३ तल्ला भएको यो पुस्तक पसलको माथिल्लो तलामा वीट जेनरेसन सम्वन्धी पुस्तकहरुको वेग्लै दराज रहेछ । म केहीवेर त्यो दराजमा अल्मलिएँ । वीचको तल्लाको भित्री ढोकामाथि एलेन गिन्सवर्गले आफ्नो गुप्ताँग हातले छेकेको ठूलो पोष्टर साइजको तस्वीर टाँगिएको थियो जसका वारेमा मैले पहिले नै पढिसकेको थिएँ । तर अहिले प्रत्यक्ष देख्ने अवसर पाएको थिएँ ।
मन त थियो यस पुस्तक पसलमा घण्टौं घण्टा विताउँ, यहीं साँझ पारुँ, यहीं रात पारुँ । तर मित्र अनिलजीलाई आफ्नो काममा पुग्नु थियो । ध्रुवजीलाई पनि भरेको केही काम गर्नु थियो र भोलिको कार्यक्रमको लागि तयारीमा जुट्नु थियो । त्यसैले उहाँहरु हतारिइसक्नु भएको मैले चाल पाई सकेको थिएँ । अनि केही थान पुस्तक किनेर म पुस्तक पसलवाट वाहिरिएँ जहाँ विजय, अनिल र ध्रुवजी गफिइरहनु भएको थियो ।
अव जाउँ, हतार भैसक्यो भन्ने शव्दावली उच्चारण हुन नपाउँदै मैले भनें, ध्रुवजी यसो गरौं, म विजयजीसँग यतै घुम्छु र साँझ फर्कन्छु, यसो गर्दा तपाईको कामलाई पनि वाधा भएन र मैले पनि समय दिएर घुम्न पाउने भएँ ।
मैले सोचेको तर भन्न नसकेको कुरा यही थियो । विजयले मुख खोल्नुभयो ।
वस् यही तय भएपछि ध्रुवजी र अनिलजी वर्कलीतिर लाग्नु भो, विजय घिमिरे र म चाहीं सान फ्रान्सिस्को चहार्न थाल्यौं ।
सान फ्रान्सिस्कोमा जान चाहेको सिटी लाइट वुकस्टोर भ्रमण गरिसकिएको थियो । मैले विजयजीलाई भनें, तपाईं त यहाँको रैथाने भैसक्नु भएको छ, अव तपाईंले यहाँका दर्शनीय ठाउँ घुमाउनु होस् ।
उहाँले भैहाल्छ नि भन्नु भयो र सिटी लाइट वुकस्टोर सामुन्नेवाट हामी अघि वढ्न थाल्यौं ।
अचानक मेरो आँखामा विट म्युजियम लेखेको साइनवोर्ड ठोक्कियो । अनि विजयजी र म त्यसभित्र प्रवेश गर्यौं । नाम म्युजियम राखे पनि रहेछ त्यो वीट जेनरेशनसँग सम्वन्धित सामाग्रीहरु, पुस्तक, अडियो, भिडियो, पर्चा पोष्टर लगायत सामाग्री पाइने स्टोर ।
त्यहाँ वीट जेनरेशनसँग सम्वन्धित थुप्रै चाखलाग्दा सामाग्री अवलोकन गर्न पाइयो । कि त मोल महँगो भएर अथवा त्यो पुस्तक आफ्नो संग्रहमा पहिल्यै भएर मैले केही पनि किनिंन र त्यसलाई म्युजियमको रुपमै उपभोग गरियो, निःशुल्क ।
विजय घिमिरे अघिल्लो पटक अमेरिका आउँदा पनि वाशिंटन डिसीमा जम्काभेट भएको थियो । यसपल्ट उहाँ आउँदा नेपाली दूतावासमा भेटघाट कार्यक्रम पनि भएको थियो । मित्र विष्णु शितलजीको निवासमा नायिका पूजाचन्दसहितको उपस्थितिमा विजयजी र हामीले मोमो खाएका थियौं र त्यसपछि तत्कालिन मेरो निवास फेयरफ्याक्स गएर रेडवाइन पिउँदै साहित्यिक गफगाफ गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो र आज अव हामी दुई उदात्त गफ गर्दै सान फ्रान्सिस्को घुम्ने क्रममा थियौं ।
अव हामी कोयर स्तम्भ चढ्न उकालो लाग्दै थियौं । विजयजीले भन्नुभयो, म धेरैपल्ट चढिसकें किन अनावश्यक प्रवेश शुल्क खेर फ्याँक्नु, वरु म तपाईंको पुस्तक हेर्दै वाहिर कुर्दछु । उहाँको भनाई ठिकै लाग्यो तर माथि पुगेपछि लाग्यो मैले ठिक ठानेर गल्ती गरेछु । किनभने मेरो फोटो लिईदिन अपरिचितहरुलाई गुहार्नु पर्यो । उहाँ साथमा भैदिएको भए विभिन्न पोजमा थुप्रै फोटो खिच्न सकिन्थ्यो । तर अव ढिलो भैसकेको थियो ।
वास्तवमा कोयर स्तम्भवाट सानफ्रान्सिस्कोको चारैतिर अवलोकन गर्न पाउँदा, विभिन्न कोणवाट शहर नियाल्न पाउँदा र सामुद्रिक गल्छीलाई त्यो उँचाइवाट सुम्सुम्याउन पाउँदा यौटा अपूर्व आनन्दको अनुभूति भयो ।
स्तम्भवाट तल ओर्लिएपछि हामी डाउन टाउन वरालिन थाल्यौं । वरालिंदै जाँदा यौटा वारको ढोकामा ह्याप्पी आवरमा सस्तो पेय पाइने सूचनाले हामीलाई आकर्षित गर्यो र भित्र पस्यौ, वस्यौं र ह्याप्पी आवरलाई सदुपयोग गर्न थाल्यौं ।
त्यहाँवाट निस्केपछि हामी चाइना टाउनको चक्कर लगाउन थाल्यौं र निरुद्देश्य केही पसलमा पसेर सामान सुम्सुम्याएर फर्कियौं, किन्नु जो थिएन ।
त्यसपछि पुन हामी विजयजीको रोजाइको यौटा भव्य चिनियाँ रेष्टुँरामा छिर्यौं र चिनियाँ स्वादका खाना र यूरोपेली स्वादका पेय उदरस्थ गर्दै नेपाली साहित्य र विविध विषयका गफ र चर्चामा अल्झियौं ।
त्यहाँवाट निस्केपछि वार्ट अर्थात् त्यहाँ चल्ने स्थानिय रेल चढेर वर्कली जान चाहें । तर विजयजीले भन्नुभयो, भाई संजयले वोलाएका छन्, एकै छिन् वसांै अनि जानुहोला ।
मैले नाईं भन्न सकिंन । संजयजी वाल्टिमोरमा वस्ने क्रममा राम्रो परिचय भएकाले भेट्दिन भन्न म कसरी सक्थें ।
संजयजीको एपार्टमेण्टमा पुगेपछि कुशल क्षेम पश्चात पुन वाइनको सिलसिला शुरु भयो, नाई भन्न सक्ने अवस्थानै रहेन । अझ थोरै भए पनि खाना नखाई जान नदिने उहाँहरुको स्नेहको म कसरी अवज्ञा गर्न सक्थें ।
त्यसपश्चात् विजयजीले वार्ट स्टेशनसम्म आएर मलाई वाटोको विषयमा वताएर फर्कनु भयो ।
विजयजी फर्कनु भएपछि सेल फोन हेर्छु त दसौंपल्ट धु्रवजीले फोन गरिसक्नुभएको रहेछ । मैले तत्कालै ध्रुवजीलाई फोन गरें । उहाँ त झण्डै आत्तिइसक्नु भएको रहेछ । साँझ निकै गहिरिईसक्यो , फोन उठ्दैन, आत्तिने कुरा पनि हो, आफ्नो घरको पाहुना ।
म वार्टमा चढिसकेको थिएँ । तर यौटा स्टेशनमा रेल चेन्ज गर्नु पर्ने थियो, त्यो पनि ध्रुवजीवाटै सुझाव लिएर वल्ल टुँगोमा पुगें, अनि पो वल्ल ध्रुवजीले लामो सास फेर्नु भो ।
भोलिको विशेष कार्यक्रमका लागि आएको म, ख्यालख्यालमै हराएछु सम्पर्कवाट र केही समय चिन्तामा पारिदिएँ । त्यसका लागि सरी भन्दै एपार्टमेण्टमा पुग्यौं र पुन साँझको खाना पिनामा लागियो ।
त्यसपछि यस पल्टको क्यालिफोर्नियाको अन्तिम रातको मिठो निद्रासँग अंकमाल गर्न पुगें ।
अव अन्तिम दिनको विहान पनि सामुन्ने आइसकेको थियो । हिजो झैं आजको दिन पनि विहान राजेनजी र म प्रातःकालिन भ्रमणका लागि निस्कियौं र उही चीरपरिचित फेलिनी क्याफेमा गएर कफी लिएर पैदल यात्राका लागि हामी निर्धारित स्थानमा पुग्यौं ।
अव आजको दिनको मुख्य कार्यक्रमको लागि तयार यसरी हुनु थियो, व्यागहरु कार्यक्रमस्थल लैजाने र कार्यक्रम समाप्त भएपछि उतैवाट एयरपोर्ट हान्निने ।
यसैवर्ष म नेपाल जाँदा यौटा काम गरेको थिएँ , ध्रुव थापाको कविता पुस्तकको सम्पादन तथा मुद्रण । पुस्तक सम्पादन र भूमिका लेखन मवाट भएको थियो भने मुद्रणको जोहो पनि मैले मिलाएको थिएँ । पुस्तक तयार गरेर मैले केही प्रति साथमा ल्याएको थिएँ र अव आज यस पुस्तकको विमोचन हुँदै थियो, दुई जना नोवेल पुरस्कार विजेताको हातवाट । यो वडो अपूर्व अवसर थियो । म यही अवसरका लागि निम्त्याइएको थिएँ । आफ्नो नाम जोडिएको पुस्तकको विमोचन आफ्नै सामु नोवेल पुरस्कार विजेताहरुवाट हुनु मेरो लागि समेत विशिष्ट अवसरको अवस्था थियो ।
मैले यो निम्तो सहर्ष स्वीकारेको थिएँ र तेश्रो पटक वर्कली आएको थिएँ ।
कार्यक्रम साँझ ५ वजे थियो, अतः विहानको खानापछि म नजिकका पुस्तक पसल चहार्न थालें । अघिल्लो पटक मैले चिनियाँ कविहरुको हजार वर्षका कविताहरुको दुर्लभ संस्करण भेटेको थिएँ । एक हजार वर्षको चिनियाँ कविका कविताको त्यो महत्वपूर्ण संकलन झण्डै २५ वर्ष अघि काठमाडौंमा झोंछेंको यौटा क्यूरियो कम प्रयोग भैसकेका पुस्तकको पसलमा भेटेको थिएँ । पुस्तक देखें, पाना पल्टाएर मोल हेरें, ३५० थियो मोल, तर मेरो खल्तीमा त्यति रकम थिएन र भोली किनौंला भनेर गएँ र भोलिपल्ट पूरा पैसा वोकेर झोछें पुग्दा त्यो पुस्तक कसैले उडाइसकेको थियो । यो कुरा मैले त्यस पुस्तक पसलेलाई भनें र उसले जवाफमा भनेको थियो, त्यस्तो कुरा हिजो भन्नु भएको भए म तपाईंको लागि सुरक्षित राखिदिन्थें । तर जे हुनु भैसकेको थियो र त्यो पुस्तक मेरो स्मृतिमा सुरक्षित थियो जुन अघिल्लो पटक किन्न पाएर म दंग थिएँ ।
यसपाली भने यौटा अनौठो, सुखद आश्चर्यपूण पुस्तक भेटें ।
क्यालिफोर्नियाकै एक कवि नेपाल गएका रहेछन्, नेपालका कवि शैलेन्द्र कुमार सिंहसँग भेटेका रहेछन् र उनकै चाँजो पाँजोमा साहित्यिक जमघट भएको पनि रहेछ । त्यो सवको तस्वीरहरु र कविताको पुस्तक मलाई लाग्यो, यसपल्टको क्यालिफोर्नियाको उपहार यही हो ।
त्यो पुस्तकसहित थप केही आफ्नो रुचिको पुस्तक लिएपछि शाट्टुक एवेन्यूमा अवस्थित टेष्ट अफ हिमालयाजतिर पाइलो लतारें ।
क्रमसः रेष्टुँराभित्र चहलपहल वढ्न थाल्यो र आमन्त्रितहरु आउन थालेपछि रेष्टुँरा गुल्जार हुन थाल्यो । अधिकतम १०० डलरसम्मको टिकट राखिएको सो कार्यक्रममा नोवेल पुरस्कार विजेताहरु डा.चाल्र्स टाउन तथा डा. मैथिली ऐयर यथासमय नै आईसकेका थिए । परिचय आदानप्रदान तथा फोटो लिने कामहरु भए । मैले यस अघि एक जना नोवेल पुरस्कार विजेतासँग भेट्ने अवसर पाएको थिएँ । उनी थिए क्यारेवियनका महाकवि डेरेक वाल्कट । यिनले नोवेल पुरस्कार पाउँदा म लण्डनमा थिएँ । यिनको ओमोरस महाकाव्यलाई विशेष चर्चा गर्ने गरिन्छ । यिनीसँग मेरो भेट वाशिंटन डिसीमा अवस्थित जर्ज वाशिंटन विश्वविद्यालयमा भएको थियो । यिनी त्यतिवेला सो विश्वविद्यालयका आवासिय प्राध्यापकका रुपमा निम्त्याइएका थिए । उनीसँगको छोटो भेट र छोटो तर अविस्मरणीय सम्वादको सम्झना सदा ताजा छ । मैले भेटेको पहिलो नोवेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार यिनी नै थिए ।
अव यसपल्ट २ जना नोवेल पुरस्कार विजेतासँग एकसाथ भेट भएको थियो । भलै यी प्रतिभाहरु साहित्यका नहुन् तर नोवेल पुरस्कारले सम्मानित, विभुषित हुन्, के यो चानचुने कुरा हो ?
कार्यक्रम अर्ध औपचारिक थियो । दुवै नोवेल पुरस्कार विजेताले ध्रुव थापाका कविता र गीत पुस्तकको विमोचन गरे जुन पुस्तकको मुखपृष्ठमा सम्पादकको रुपमा मेरो नाम पनि अंकित थियो । यो मेरो अहम् पनि मान्न सकिएला, तर यथार्थमा यो मेरो विनम्र यथार्थ प्रस्तुति मात्रै हो ।
पुस्तक विमोचनपछि दुवैले आआफ्नो क्षेत्रको संक्षिप्त प्रस्तुति गर्दै आज पुस्तक विमोचन गर्न पाएकोमा प्रशन्नता जाहेर गर्दै कविलाई शुभकामना र वधाई ज्ञापन गरे ।
कार्यक्रमको दोश्रो चरणमा डिनरपछि रेष्टुँराको माथिल्लो तल्लामा अवस्थित योगाकुला हलमा कार्यक्रम शुरु भयो जसमा अमेरिकन कवि डेभिड सिवोर्गको कविता वाचन तथा ध्रुवजीको पुस्तकवारे विवेचना थियो । झण्डै २ घण्टा पुस्तक चचार्, कवि गोष्ठी , मन्तव्य लगायत कार्य गरेपछि कार्यक्रम समापन भयो र ध्रुवजीले मलाई हतार हतार एयरपोर्टतिर लिएर आउनु भयो ।
अस्ति दिउँसो झलमल्ल घाममा ध्रुवजी यही एयरपोर्टमा लिन आउनु भएको थियो र आज राती उहाँनै विदाईका लागि आउनु भएको छ । यस्तो लाग्छ, जीवन भनेकै स्वागत र विदाईको उपक्रम हो । जन्म स्वागत हो भने मृत्यु विदाई ।
ध्रुवजी मलाई विदा गरेर फर्किसक्नु भएको छ । म एयरपोर्टका वन्द वार र रेष्टुँराहरु हेर्दै सुरक्षा जाँच सकेर सकसकाई रहेको मुखलाइ स्टार वक्सको तात्तातो कफीले डाम्ने उपक्रममा लागें, किनभने वन्द हुन त्यही स्टोर मात्र वाँकी थियो । त्यो पनि स्टारवक्सका ती थकित कर्मचारीहरु हाम्रो अर्डरलाई अन्तिम अर्डर भन्दै वन्द गर्ने तर्खर र सुरसार गर्दै थिए ।
मध्यरातको उडान भएकाले होला, यात्रुहरुको त्यति चाप थिएन । व्याग प्रतिक्षालयको गद्दादार मेचमा राखेर स्टारवक्स कफीको चुस्की लिंदै टहलिन तथा झ्याल वाहिरको अँध्यारोमा वलेको वत्तीले उज्यालो पारेको संसारको अवलोकनमा लागें म र वेलावेलामा काँचको पर्दामा उडान समय नियाल्न थालें । तर कुन सड्को उडान त एक घण्टा पर सरिसकेछ । हरे, यो पहिल्यै थाहा पाइएको भए ध्रुवजीलाई त्यतिसारो धपेडी गर्नुपर्ने थिएन । तर हुनु भैसकेको थियो, थकथकी मान्नुको कुनै प्रयोजन थिएन ।
ढिलो भएको घण्टा वितेपछि विमानले उडानकालागि स्वागत ग¥यो र विमानभित्र प्रवेश गरें ।
हाते व्याग टाउको माथिको कम्पार्टमेण्टमा राखेपछि क्यामरा व्याग सिटमुनि घुसारेर मेम्वायर अफ अ विटनिक पुस्तक पल्टाउन थालें । कफी विमानमा प्रवेश गर्नु अघि नै सकेर ट्र«यासविनमा खाली कप फ्याँकिसकेको थिएँ ।
पुस्तकको मुखपृष्ठमावेवास्तासँग मिलाइएको ओछ्यानमा शर्ट र हाफ पाइण्ट लगाएकी डायनको फोटो छ । यो फोटो हेर्दा लाग्छ, उनले अनेक पुरुषसँग सहवास गरेको यही ओछ्यान हो र उनी हल्का मिठो सम्झनासहित हातमा रहेको कुनै वस्तु समातेर वसेकी छिन् । मुख पृष्ठमा न्यूयोर्क टाइम्सले लेखेको टिप्पणी छापिएको छ, वीट पुस्तालाई हेर्ने यौटा दुर्लभ अवसर......यौटी महिलाको आँखाले ।
अमेरिकाको आन्तरिक उडानमा चिया, कफी, जुस र चिसा मदीरारहित पेय निशुल्क पाइन्छ, तर मादक पदार्थ भने किनेर पिउन पाइन्छ । आजको डिनरमा पेयको अवसर पाइएको थिएन र अव विमानमा सशुल्क रातो जाँड अर्थात् रेड वाइन पिउँदै डायनको यौन चर्तिकला पढ्न थालें ।
एक होइन धेरैपल्ट मैले रेड वाइनको अर्डर गरिरहें र डायनका विभिन्न मुद्राका यौन खेलको वर्णन पढिरहें ।
विमान पूर्वतिर हान्निएर आकाशमा रजाईं गर्दै थियो ।
म १२५ औं पेजमा पुग्दै थिएँ, उ ममाथि चढ्यो, मैले मेरा खुट्टाहरु उसका काँधमा राखें र उसको मभित्रको प्रवेश विस्फोटक थियो...
अरु हरफमा आँखा पु¥याउनुको साटो मैले आँखा चिम्लिएँ र सम्भावित थप दृश्य र चरणहरुको कल्पना गर्न थालें । विमान आफ्नै गति र उँचाइमा मग्नमस्त थियो, म पनि निद्रालु भएर विमानको झ्याल वाहिर आँखा पु¥याउन थालें ।
वाहिर निष्पट्ट अँध्यारो थियो विहानीको शुभ प्रतिक्षामा ।